Soup miaraka amin'ny duck recipe miaraka amin'ny sary amin'ny dingana
Soup miaraka amin'ny duck
Poster 20.09.2018 20.09.2018 Fampianarana voalohany
Tiavo ny sakafo voalohany, saingy tsy mahafantatra ny fomba amam-panaovana sakafo mahazatra. Amin'izao fotoana izao dia holazaiko anao ny fomba fanaovana lasopy miaraka amin'ny duck iray araka ny fomba manokana. Ity lasopy ity no handresy ianao hatramin'ny voalohany!
Famaritana ny fanomanana:
Ny savony voaomana araka ity recipe ity dia mitovy amin'ny lovia Aziatika. Misaotra ny zava-mahadomelina sy ny ginger, ny sipa dia mahazo tsiro tsy hay lazaina, izay tsy mitovy amin'ny zavatra hafa. Ny soup dia mety tsara amin'ny sakafo antoandro sy ny sakafo hariva, ary tsy isalasalàna fa handresy ny olona ao amin'ny ankohonany amin'ny alàlan'ny baikony. Andramo izany ary hivoaka ny zava-drehetra!
Ny lamosin'ny duck, avela, elatra - 500-700 Gram
Olon-menaka - 1-2 Art. lovia kely
Chicken Bouillon Cube - 1 Kambana
Voankazo masira - 20-30 Gram
Fresh Ginger - 50 Gram
Peppermint - 16 Pieces
Bay leaf, anise - amin'ny 2 Pieces
Garlic - 4 gny
Onion - 4 Pieces
Brown Sugar - 1 / 4 Glass
Sherry - 6 Art. lovia kely
Rantsan-tànana avy any Brussels Sprouts - 1 stuck
Ahoana no hanamboarana lasopy miaraka amin'ny duck
Voalohany indrindra, dia hafananay ny oven amin'ny degre 220. Ampongabendanitra no napetraka teo amin'ny taratasy mivalona, ​​vita amin'ny pergétage. Manosotra menaka, mamafy sira sy zava-manitra. Afangaro ny kitapo kely ho an'ny 35-45 minitra mandra-pahavitany.
Rehefa vonona ny duck dia mila apetraka ao anaty fonosana lehibe. Maniraka kobay koa isika, akoho, holatra, holatra, dipoavatra, ranomanitra, kintana anise sy rano.
Mifangaro tsara ny zava-drehetra, aforeto amin'ny rindrina ary andao amin'ny 45 minitra amin'ny hafanana midadasika. Tokony hanangom-boankazo ny lasopy, ary farafahakeliny kely ny afo.
Esory ny hena avy amin'ny lasopy, esory ny taolana ary avereno any amin'ny lasopy ilay hena.
Tao anaty menaka fanosotra no nanafana ny menaka oliva kely, izay nanosihanay ny tongolo lay efa nokasihina sy nasiaka mandra-pahatonga anay ho malefaka. Alefaso any amin'ny lasopy ity roatra ity, dia ampio siramamy, sherry ary hikolokolo mandra-pahavitany.
Alohan'ny hahatongavan'ny farany, ampio ny ravin'i Brussels any amin'ny lasopy. Soup with duck is ready, good appetit!
Tianao ve ilay lahatsoratra? Aza adino ny hizara izany amin'ny namanao - ho feno fankasitrahana izy ireo!
← Dolma avy amin'ny ravina voavoly
Lasopy siramamy miaraka amin'ny fofom-bary →
Sokajy Select tenyVideo (43)Horoscope (2)Health (85) Ny fahasalaman'ny zaza (21) Ny fahasalaman'i Neny (15)Interesting (231)Beauty (33) Sakafo (8) Fashion (10)Fitiavana (20) Fifandraisana (20)Maternity (54) Pregnancy (15) Parenting (31)Online calculators (3)Hery (18) Ny fiterahana (2) Ny sakafo ara-pahasalamana ny mpitsabo mpanampy (2) Sakafo ara-pahasalamana mandritra ny herintaona ka hatramin'ny herintaona (13)Travel (4)Recipes (1 367) Fomba faharoa (755) Desserts (255) Ny dingana voalohany (351)Family and home (60) Life advice (Layfkahi) (37)Dream Interpreter (38)